Fanafody an-trano hanasitranana ny fivontosan'ny kaninina | Tontolo alika
Ny conjunctivitis dia aretina izay mitaky fitsaboana ara-pitsaboana mba hahasitrana. Ankoatr'izay dia tsy maintsy raisina fa mora miparitaka izy io raha tsy raisina ny fepetra fidiovana mahazatra, toy ny fanadiovana tanana alohan'ny sy aorian'ny fikasihana ilay biby. Na eo aza izany, mba hisorohana ny olana dia afaka manao zavatra izay hanampy ny volontsika ho sitrana haingana araka izay tratra.
Noho izany, eto ambany izahay dia hilaza aminao inona ny fanafody mahomby indrindra ao an-trano hanasitranana ny conjunctivitis an-kaninina.
1 Ny fitsaboana any an-trano no be mpampiasa
1.1 Diovy amin'ny kamamile ny masony
1.2 Asio famatrarana mafana / mangatsiaka
1.3 Diniho ny fametahana vozon'akanjo Elizabethan eo aminy
1.4 Omeo sakafo kalitao izy
1.5 Mampiasà Serum Physiological
1.6 Mitete ny maso antiallergika (raha sanatria misy allergy)
2 Inona no atao hoe conjunctivitis amin'ny alika?
3 Ahoana no fanasitranana ny conjunctivitis amin'ny alika?
4 Mandra-pahoviana no haharetany?
5 Ahoana ny fanaparitahana azy?
Ny fitsaboana any an-trano no be mpampiasa
Diovy amin'ny kamamile ny masony
Ny chamomile dia manana toetra mampiavaka ny bakteria izay nampiasaina nandritra ny taonjato maro hanasitranana ny areti-maso. Ankehitriny, mbola iray amin'ireo fitsaboana trano tsara indrindra any, ary iray amin'ireo mora voaomana.
Mila mampiditra chamomile fotsiny ianao (azonao atao izany amin'ny valopy izay amidy amin'ny fivarotana lehibe), avelao hangatsiaka ary hamandoana gauze madio ary avy eo diovy ny maso. Avy eo, amin'ny gauze hafa, avereno ny iray hafa.
Asio famatrarana mafana / mangatsiaka
Ny fametahana rano mafana sy mangatsiaka mifandimby dia hanampy amin'ny fanalefahana ny soritr'aretin'ny conjunctivitis amin'ny alikao.. Raha ny hatsiaka kosa dia hampihena ny mena ary ny fivontosana, ny hafanana hanala ny fahasosorana. Mazava ho azy, mba hahombiazany dia mila avelanao izy ireo mandritra ny dimy minitra.
Diniho ny fametahana vozon'akanjo Elizabethan eo aminy
Raha toa somary mahasosotra ny volonao ary tsy hijanona ny fikolokoloana ny maso voakasik'izany, dia mety ilaina ny mametraka kola Elizabethan aminy. Ho hitanao io karazana rojo io amidy any amin'ny tobim-pahasalamana veterinera, fa koa amin'ny fivarotana vokatra biby sy fivarotana an-tserasera.
Omeo sakafo kalitao izy
Isika no mihinana. Mba hahafahan'ny vatana miady amin'ireo zavamiaina bitika izay misy fiantraikany eo aminy, tokony hahazo ny otrikaina ilainao ianao. Noho izany, tena asaina manome ny sakafo volom-borona izay tsy manana serealy na vokatra azo avy amin'ny vokatra.
Mampiasà Serum Physiological
Raha mijery ny mpitsabo biby ianao amin'ny ahiahy fa manana izany karazana olana izany ny alikanao, Azo antoka fa hanome vahaolana masira ho anao ity, ho anao hanadio ny faritra mason'ilay alika izay voa.
Izany dia hahatonga ny alikantsika hahatsapa ho tsy mahazo aina kokoa noho io toe-javatra io, izay matetika no aseho amin'ny endrika lagañas izay tsy maintsy alaina. Hahazo masira ara-batana amin'ny fivarotam-panafody rehetra ianao ary afaka manao fampiharana arak'izay ilaina ianao. Tokony apetrakao amin'ny gauze kely ity vahaolana ity ary hosory miaraka aminy ilay faritra voakasik'izany, amin'ny fikarakarana manokana.
Mitete ny maso antiallergika (raha sanatria misy allergy)
Tsy mitranga amin'ny tranga rehetra izany, fa matetika mitranga izany ny alika sasany dia voan'ny conjunctivitis amin'ny allergy. Mety hitranga izany noho ny fidiran'ny karazan'olona vahiny any ivelany, fa noho ny fikororohana misy singa iray izay miteraka tsy fahazakana ihany koa, ankoatry ny antony maro hafa.
Ny matihanina dia hanoro hevitra antsika hampiasa an'ity ranoka ity izay midika ho vahaolana ho an'ny alikantsika, satria manana singa anti-milaza zavatra ilaina amin'ny toe-javatra ireo. Tsy mila mametraka afa-tsy vitsivitsy fotsiny amin'ny mason'ny voina ianao. Ny zavatra tokony hoeritreretinao dia raha toa ka manana karazana ratra ity maso ity noho io dia tokony ho hitanao ilay manampahaizana manokana satria tsy dia manampy firy izany.
Ny iray amin'ireo zavamaniry izay manana fananana ara-pahasalamana mifandraika amin'ny conjunctivitis amin'ireo alika malalantsika dia ny thyme. Ity zavamaniry ity dia manana toetra mampiavaka ny anti-milaza zavatra ary koa ny famonoana otrikaretina, noho izany dia tsara kokoa ho an'ny fitsaboana ny karazana conjunctivitis, na mamindra na tsy mahazaka.
Tsy maintsy manao infusion ianao, avy eo totozy ary avelao hangatsiaka mandra-pahatongan'ny hafanana. Tokony ampiasaina raha vao manakaiky ny hatsiaka, nefa tsy tonga any amin'ny faran'ny fermentation, satria mitondra bakteria bebe kokoa. Amin'ny gauze voapotsitra amin'ity fampidirana ity no hanadiovanao ny mason'ilay biby fiompinao amin'ny fanorana tsara.
Toy izany koa no mitranga amin'ny anao, oregano dia ampiasaina amin'ny fomba mitovy, miaraka amin'ny dingan'ny fanaovana fampidirana an'io miaraka aminy mba hampiharina amin'ny mason'ny alikanao, izany dia midika hoe fitsaboana voajanahary miaraka amin'ny toetra mahasoa hitsaboana ny conjunctivitis.
Ny toetra mampiavaka ny oregano dia misy ifandraisany amin'ny fananana antifungal toy ny anti-milaza zavatra sy anti-bakteria, izay mahatonga azy io ho zava-dehibe tokoa ny fitsaboana ireo karazana conjunctivitis izay misy ifandraisany amin'ireo mpiasan'ny allergy na ateraky ny bakteria na ny holatra. Ny singa miady amin'ny inflammatoire dia hampihena be ny fivontosana sy ny fahasosorana.
Ny iray amin'ireo fanafody an-trano izay afaka manampy anao hanatsara ny biby fiompinao dia ny fampidirana calendula voajanahary, ho an'ny fananana be dia be, anisan'izany ny anti-milaza zavatra, anti-bakteria, mampitony ary antiseptika.
Ny iray amin'ireo singa mampiavaka ny calendula amin'ireo zavamaniry voalaza etsy ambony dia ilay manome azy fananana fanasitranana, izay mahatonga azy io ho zava-dehibe tokoa ho an'ireo conjunctivitis izay miteraka karazana ratra amin'ny mason'ny biby. Izy io dia tena mandaitra amin'ny tranga rehetra amin'ny bakteria conjunctivitis amin'ny alika.
Ilay mahery fananana miady amin'ny bakteria sy anti-inflammatoire izay ananan'ny fennel mahatonga azy io ho iray hafa amin'ny fitsaboana an-trano voajanahary izay manatrika ny fiatrehana ireo tranga isan-karazany amin'ny conjunctivitis amin'ny canine.
Zava-dehibe iray amin'ny fennel dia ny fananana singa manohana ny mena ao amin'ny mason'ny biby fiompintsika ho very, ankoatry ny tena mety amin'ny fampihenana bakteria, raha sendra bakteria conjunctivitis.
Inona no atao hoe conjunctivitis amin'ny alika?
Toy izany koa fa manana conjunctivitis ny olombelona, ​​ny alika koa dia mijaly noho io toe-javatra io. Fivontosana indrindra izany, izay mitranga amin'ny membrane conjunctiva izay tompon'andraikitra amin'ny fanakonana ny maso, ary miteraka fivontosana amin'ny hodi-maso miaraka amin'izay izay hiteraka tsy fahazoana aina manokana ho an'ny alikanao.
Ity membrane ity dia manana toetra mampiavaka ny viscosity amin'ny fanjakany ara-dalàna., maha-sosona manify be izy ary koa translucent, fa ity lafin-javatra farany ity dia ho very mandritra ny conjunctivitis, satria ho mena io sela io, miteraka fandoroana, fivontosana ary handrovitra ny mason'ilay malalanao.
Tahaka izany koa ny olana iray izay misy fiatraikany amin'ny olona fahita matetika, amin'ny tranga ny conjunctivitis an-kika dia aretina mety hitranga amin'ny alika miaraka amin'ny vanim-potoana sasany ihany koa izany. Na dia miteraka fahasosorana lehibe ho an'ireo alikantsika aza izany, Ity aretina ity dia manana fotoana maharitra eo imason'ny bibinay ary tena sarotra ho an'ity aretina ity ny miantraika maharitra amin'ny fahitan'ny biby fiompinay.
Ahoana no fanasitranana ny conjunctivitis amin'ny alika?
Na inona na inona mitranga amin'ny alikanao sy izay karazana fahasosorana amin'ny maso hitanao aminy, Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manatona mpitsabo momba ny biby, izay manome anao karazana diagnostika mety amin'ny olan'ny biby fiompinao.
Midika izany na inona na inona toe-javatra tokony hisafidianana karazana fitsaboana ho an'ny tenantsika, raha tsy fantatra hoe inona ny tranga manokana amin'ny conjunctivitis izay iainan'ny alikantsika.
Si conjunctivitis Izany dia vokatry ny toe-piainana voalaza teo, fa tsy misy vokany ratsy amin'ny karazana aretina hafa mety hitranga amin'ny alika izany, ny fitsaboana dia mifototra manokana amin'ny fanadiovana ny maso amin'ny alàlan'ny fampiasana gauze steril voapotsitra anaty vahaolana sasany.
Tamin'ny fotoana hafa dia nanandrana nampiasa vahaolana momba ny lohahevitra izy, fa ny fitrohana ny hoditra dia tena sarotra, ary koa ny fampiharana azy ary misy ifandraisany amin'ny zava-misy fa marefo ity faritra ity.
Raha toa ny alika efa nanolotra conjunctivitis imbetsaka teo aloha, ary mody tsy mandeha intsony izany, afaka mampiasa fomba fisorohana hafa ianao, ny fomba fanatanterahana an'io karazana fanadiovana io amin'ny maso, fa matetika sy tsy misy aretina, manakana ny alika tsy hanakaiky zavatra simika, manapaka ny volo izay eo akaikin'ny faritry ny mason'ilay alika ary manatanteraka fanitsiana miaraka amina vanim-potoana sasany.
Mandra-pahoviana no haharetany?
Ny conjunctivitis amin'ny alika dia haharitra arakaraka ny hamafiny na ny antony nahatonga ny fivontosan'ny sela mifangaro ao amin'ny mason'ny biby fiompinao, matetika aretina vetivety ity.
Miankina amin'ny fitsaboana sahaza azy io koa mba hiankina amin'izany. Midika izany fa raha mbola manahirana ny alika ilay fivontosana mety miankina betsaka amin'ny hetsika haingana ataontsika.
Ny tranga tsy maharitra mateza indrindra dia ny an'ny fahasosorana conjunctivitis, izay hovahana afaka andro vitsivitsy. Mifanohitra amin'izany, ny conjunctivitis virosy no matetika lava indrindra, ary ny alika dia mety hiaina ny soritr'aretiny mandritra ny 15 andro eo ho eo.
Ny conjunctivitis bakteria matetika dia maharitra eo anelanelan'ny fito sy folo andro ary raha sendra olona marary alika dia mety hanjavona ao anatin'ny andro vitsivitsy ny fivontosana ateraky ny vatana vahiny. Ny tsy fananan'ny biby an'io alergen io intsony dia hahatonga ity karazana conjunctivitis ity hihena.
Raha nieritreritra ianao fa mety manana ny alikanao tranga ny conjunctivitis Izy io dia satria nanamarina ny masony ianao ary nahita azy ireo kely ianao sosotra, mena na maina.
Matetika dia hita marimarina fa tsy mahatsiaro tena ho tsara ilay biby amin'ny fijeriny, na hitanao izany manana karazana fivoahan-drano avy amin'ny maso, izay afaka mivadika mavo na maitso amin'ny tranga matanjaka indrindra.
Mety ho hitanao koa izy manandrana manintona ny tongony ho an'ny masony, amin'ny mangidihidy ihany koa afaka mandà ny mazava ihany koa, toy ny mariky ny tsy fahazoana aina izay mety noho ny trangan'ny conjunctivitis.
Rehefa miresaka momba ny conjunctivitis mahazaka, miresaka conjunctivitis izay tsy mifindra isika dia miresaka, fa tsy maintsy atao mazava tsara amin'ny fihenan'ny alikaola na ny fikaohin'ny kornea.
Conjunctivitis miparitaka eo anelanelan'ny alika no maneho ny a aretina toy ny virus. Amin'ity tranga ity dia tena zava-dehibe ny hery mifindra, afaka mamindra amin'ny alika hafa ary na amin'ny olombelona aza.
Ny conjunctivitis amin'ny kanine dia aretina iray izay afaka maharitra fotoana fohy hanasitranana tanteraka, fa ny fampifangaroana ny fitsaboana veterinera amin'ny fanafody ao an-trano dia azo antoka fa hahazo ny endriny mamy ny volonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Fanafody an-trano hanasitranana ny conjunctivitis an'ny canine
Ahoana ny fomba hisorohana ny lalitra tsy hanaikitra ny sofin'ny alika